को किराना पसल लागि व्यावसायिक उपकरण के छ?
किराना पसल वा कुनै पनि ढाँचा लिन विशेष भण्डारण अवस्था र कार्यान्वयन आवश्यक खाद्य उत्पादनहरु को एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ। आधुनिक सुपरमार्केट मा भोजन उत्पादन, मिनी-बजार, किराना पसल बिक्री साथै सम्बन्धित सामान घरेलू रसायन, स्वच्छता उत्पादनहरु, घरेलु सामान -। सामान प्रत्येक समूह विशेष व्यापार उपकरण राखिएको हुनुपर्छ।
प्रशीतन उपकरण। यो काउन्टरहरू वा showcases, ठाडो जमाई प्रदर्शनहरू जमाई वा स्लाइडहरू, साथै मध्यम Bonnets जमाई। बारी मा यी उपसमूहहरु सबै उपकरण मा शासन संग0+ बाट 7C र उपकरण एक तापमान मोड संग -2 बाट +2 गर्न विभाजित छन्। पहिलो प्रदर्शन र यस्तो दूध, sausages र डेली मासु, पनीरों, तरकारी र फलफूल रूपमा खाद्य उत्पादनहरु को बिक्री को लागि सेवा गर्छन्। computations र कार्यान्वयन लागि chilled मासु र semifinished उत्पादन, माछा तपाईं आवश्यक जोगाउनुहुन्छ जमाई मंत्रिमंडलों को काम मात्रा मा तल्लो तापमान भएको दोस्रो प्रकार को। जमाई मंत्रिमंडलों र स्लाइडहरू सबैभन्दा महंगा व्यावसायिक उपकरण हुन्।
चिसो उपकरण। नाम implies रूपमा, चिसो प्रदर्शन गर्ने काम मात्रा (-18C0देखि) मा कम तापमान दिन। व्यावसायिक उपकरण चिसो Bonet फ्रीजर वा स्नान, चेस्ट समावेश र छाती-Bonet चिसो, showcases फ्रीजर पारदर्शी वा पूर्ण धातु ढोका संग अलमारियाँ, साथै एक संयुक्त केस Bonet। फ्रीजर डिजाइन र प्रदर्शन प्रविधिको व्यापक विविधता छ। ठंडा समान प्रदर्शन चिसो को लागत - एकदम उच्च छ।
तटस्थ उपकरण। यो जो तपाईंले अपलोड र भण्डारण र बिक्री को लागि विशेष अवस्था आवश्यक छैन भनेर उत्पादनहरू बेच्न अनुमति दिन्छ व्यावसायिक उपकरण, को फराकिलोकालागि खण्ड छ। यो ठंडे बस्ते र मंत्रिमंडलों र समतल र रचनाहरू लुगा। समतल र मंत्रिमंडलों अक्सर धातु वा chipboard बनेको छन्। तिनीहरूले पर्याप्त सस्तो हो। तिनीहरूले व्यापार को बिल्कुल सबै क्षेत्रहरू प्रयोग गरिन्छ।
बिक्री प्रणाली। मूल्य धारकों, सपिङ्ग गाडी, गाडियां, कक्षहरू, विज्ञापन प्रदर्शित गर्दछ, को समतल र Bonet मा विभाजक मात्रा: यो विवरण को एक सम्पूर्ण दायरा बिना स्टोर खोल्न असम्भव छ। यी सबै सामान परिष्करण, कुनै पनि पसलमा स्पर्श एक काउन्टरटप फारम र आत्म-सेवाको रूपमा छन्।
Skladksoe उपकरण। यो एक ठूलो लोड सीमा भएको एउटा विशेष भण्डारण रैक छ। यो पनि फ्रीजर र कूलर र यस्तै ठूलो मात्रा कोठामा समावेश छ। यस्तो उपकरण व्यावसायिक उपकरण संयोजनमा खरिद गरिएको छ। ठूलो पसलहरूमा मा rokly खरीद गर्नुपर्छ र ट्रक गोदाम कर्मियों काममा मदत गर्न र दक्षता वृद्धि गर्न।
प्राविधिक उपकरण। जटिल उपकरण पसलहरूमा लागि प्रयोग विशाल खण्ड। पसलमा अक्सर मासु र पकाउने कार्यशालाओं पनि कहिलेकाहीं माछा पसल बनाउन छन् व्यवस्था। बिरुवाहरु को प्रत्येक प्रकार जो प्रक्रिया कटौती गर्न, पैक माल अनुमति दिन्छ विशेष उपकरण, आवश्यक छ। अक्सर "tehnologichki" प्राप्त ओवन, COMBI ओवन, लगभग पकाउने, आरी, सफाई, विशेष टेबल र डूब को तयारी मा प्राविधिक को शीर्ष छन् जो। कार्यशाला उपकरण र योजना तिनीहरूले व्यावसायिक magazinostroitelnoy कम्पनी मा सबै पसलहरूमा एक जटिल हुन आवश्यक को एक जटिल योजना छ।
म व्यावसायिक उपकरण कसैले खरीद मा कठोर र लापरवाह बचत साँच्चै पैसा राख्न मदत गरेको छ भन्न छन्। एक अनुमान छोट्याउन र विशाल छूट आवश्यक गर्दा, परिणाम गरिब गुणस्तर काम ठेकेदार (कुनै एक राम्रो एक pittance को लागि काम!) अनि prohibitively उच्च मूल्यहरु को बजेट स्थितिहरू देखि "काटियो" एक अस्तव्यस्त खरीद छ। लाभप्रद गर्न व्यावसायिक उपकरण किन्न र तपाईंले केही सरल कदम पालना गर्न आवश्यक एक दोकान खोल्न लाभदायक nemenee:
जो उपकरण को सबै प्रकार को लागि आवश्यक मानकहरु निर्दिष्ट स्पष्ट Tor, हुन। यसलाई अग्रिम पनि सन्दर्भ को मामला मा बाहिर इशारा लायक छ जो न्यूनतम उपयोगी बजेट, थाहा महत्त्वपूर्ण छ। सन्दर्भ सर्तहरू चिरपरिचित कम्पनीहरु जटिल SHOPFITTING मा लगे मा पठाउन।
व्यापारिक उपकरण को बजार अध्ययन गर्न, सहकर्मी प्रत्येक ब्रान्ड लागि समीक्षाएँ। तपाईं मुद्दाहरू बुझ्न, यो निर्णय गर्न सजिलो छ। व्यावसायिक उपकरण को 2-3 स्वीकार्य ब्रान्ड तपाईं पूर्णतया कार्यात्मक पूरा, मोडेल दायरा र विश्वसनीयता को संरचना चयन गर्नुहोस्। कोमल मा आफ्नो रुचि लीन।
सानो विवरण गर्न गुणात्मक विस्तृत डिजाइन परियोजना vploit स्टोर। त्यसपछि तपाईं खोल्ने अघि नसाहरू र पैसा को अनावश्यक खर्च जोगिन हुनेछ।
स्वाभाविक, तपाईं प्रत्येक ठेकेदार लागि छुट लागि अनुरोध गर्न आवश्यक छ। सधैं सबै भन्दा राम्रो परिणाम - यो सबै भन्दा कम मूल्य भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। प्रदान छूट मा ठेकेदार बजेट देखि यस्तो मूल्य धारकों रूपमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, प्रहार छैन निश्चित गर्नुहोस्। , बलियो प्रतिष्ठा संग एक ठेकेदार पर्याप्त मूल्य चयन, तपाईंको पूर्व-गणना बजेट मा फिट।
यस्तो उपाय तपाईं उपकरण टर्नकी मा समय, उच्च गुणस्तरीय र उच्च-टेक भण्डारण गर्न मद्दत गर्नेछ।
कम्पनी काम को प्राविधिक र आर्थिक सूचकहरू
निश्चित सम्पत्ति को सूचक
लोगो संग चकलेट: कर्पोरेट शैली को गठन को लागि मूल पाठ्यक्रम
किन डलर बढ्दो?
Vsevolozhskaya रेलवे स्टेशन
अभिनेता क्रिस लेमन: जीवनी, फोटो। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
आफ्नै हातमा एउटा aerodynamic शरीर किरा कसरी बनाउने?
सैन्य लोकगीत। हितोपदेश र युद्ध को वचनहरू
Zopnika tuber: औषधीय गुण, लोक चिकित्सा मा प्रयोग
Fibrocystic स्तन रोग: उपचार, लक्षण र कारण
किन र किन पुरुषहरूको परीक्षामा पीडा छ
विषाक्त हेपाटाइटिस: कारणहरू, लक्षणहरू र उपचार
Calamondin - घरमा हेरविचार। हेरविचार, transplanting र बढ्दो समस्या